Ahoana ny fametrahana WordPress amin'ny Pantheon | Martech Zone
Ahoana ny fametrahana WordPress amin'ny Pantheon
Talata, Novambra 21, 2017 Andrew Taylor
Ny tranokalan'ny orinasanao dia iray amin'ireo fanananao manan-danja indrindra. Ny fotoana laniana, ny fahazoana ary ny fahombiazan'ny famatrarana dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fehin-kevitrao. Raha efa mihazakazaka amin'ny tranokala WordPress ny tranokalanao — arahabaina! —Avonona ny hanome traikefa tsy misy tohiny ho an'ny mpampiasa anao ianao ary ny ekipanao.
Raha ny fisafidianana ny CMS mety dia dingana voalohany lehibe amin'ny fananganana traikefa nomerika mahafinaritra. Ny fisafidianana amin'ny mpampiantrano mety amin'izany CMS dia afaka manatsara ny fahombiazany, manatsara ny fotoana iainana, mampihena ny fotoana fampandrosoana ary manome fanampiana lehibe.
Ny sandan'ny WordPress amin'ny Pantheon
Pantheon dia a managed WordPress hosting sehatra manome ny hafainganana sy ny fahombiazana ilainao hanovana ny mpampiasa ho mpitarika. Tsy toy ny ankamaroan'ny mpamatsy fampiantranoana WordPress mampiasa server na milina virtoaly, Pantheon dia mandeha amin'ny fotodrafitrasa miorina amin'ny fitoeran-javatra. Ny kaontenera dia manana tombontsoa marobe, ao anatin'izany ny famatsiana haingana, ny fahazoana avo lenta, ny scaling malefaka ary ny fahombiazana tsara kokoa.
Ho fanampin'ny fanapahana fotodrafitrasa farany ambany, manana tranokala Pantheon ihany koa PHP 7 amin'ny toerana misy anao, tantanana maimaim-poana HTTPS, cache amin'ny pejy feno, ary a Global CDN- fampisehoana tampon'isa tampoka eo ivelan'ny-boaty. Tsy lazaina intsony ny antsika workflow fampiharana tsara indrindra tian'ireo mpandrindra.
Mampifangaro an'i Pantheon amin'ny fifaninanana io fifangaroana sehatra goavambe io sy fitaovana natokana ho an'ny mpamorona tranokala. Ny sehatra dia zahana mba hitantanana tranokala WordPress amin'ny ambaratonga miavaka.
Manomboka amin'ny WordPress amin'ny Pantheon
Ny maodelin'ny vidin'ny Pantheon dia mamela anao mamorona tranokala sandbox maimaim-poana — drafitra iray fotsiny no alainao ary manomboka mandoa ianao rehefa mampiditra ny fanjakanao manokana ary miaina mivantana. Mora ny mamorona tranokala WordPress vaovao, misafidiana WordPress fotsiny rehefa mamorona tranokala vaovao.
Azonao atao ny misafidy mifindra tranokala WordPress misy any Pantheon. Ny fitaovan'ny fifindra-monina dia mitarika anao amin'ny alàlan'ny fametrahana plugin ao amin'ny tranokalanao misy, avy eo ny famindrana mankany amin'ny tranokala fasika any Pantheon dia mandeha ho azy.
Na izany na tsy izany dia afaka manandrana haingana ny sehatra ianao, na amin'ny tranokala WordPress vaovao na iray amin'ireo tranokala misy anao, maimaim-poana. The Torolàlana ho an'ny Pantheon haingana manana dingana amin'ny antsipiriany raha te handray tranokala hatrany ianao.
Miasa amin'ny Pantheon
Aorian'ny fanananao tranokala WordPress amin'ny Pantheon dia manana safidy roa ianao hiasa. Ny fomba voalohany sy tsotra indrindra dia ny manitsy ny tranokalanao WordPress mivantana amin'ny Pantheon. Manova lohahevitra, ampio plugins vaovao na amboary rakitra amin'ny SFTP sy git. Na inona na inona fomba fiasanao, ny fanovana rehetra dia arahana amin'ny fibaikoana ny kinova. Miaraka amin'ny tahirin-drakitra sy tahirin-kevitra momba ny tahiry izay mikarakara ny atiny koa tsy misy tokony hatahorana.
Ny fomba hafa hiasana amin'ny WordPress amin'ny Pantheon dia sarotra kokoa nefa koa tena malefaka sy matanjaka, mifanaraka amin'ny fomba tianao hiasa. Midika hanampy ireo mpandrindra handrindra ny lalan'ny fiasan'izy ireo ary hiaraka amin'ireo serivisy hafa.
Fitaovana herinaratra toy ny gara farany hitantanana Pantheon amin'ny tsipika baiko na Quicksilver misy ny fampiharana hook hook. Manana ohatra mandroso koa isika, toy ny ny plugin plugin Terminus build ary WordPress mandroso amin'ny Pantheon, mampifandray ireo toeram-pivarotana Git ivelany, fampidirana mitohy, mpamorona, ary fanandramana mandeha ho azy miaraka amin'i Pantheon ho an'ny ekipa mitaky onjam-piasa sarotra sy mandeha ho azy.
Mandehana mandroso ary manaova mahatalanjona!
Pantheon dia manome sehatra fampiantranoana lehibe ary koa fitaovana hanampiana amin'ny fitantanana ny tranokalanao WordPress ary hitazomana azy io amin'ny tsara indrindra. Maimaimpoana ny manandrana dia tohizo mitsara ho anao.
Midira amin'ny kaonty Pantheon
Tags: fampandrosoanafampiantranoanamifindra WordPressPantheonWordPress hostingfifindra-monina wordpress
Tian'i Andrew ny miasa Pantheon ireo masoivoho manampy ary manome valiny ny fiarahamonina WordPress. Amin'ny maha-developer web taloha azy, nandany ny fotoanany tamin'ny tetik'asa marobe ho an'ny mpanjifa toa ny AMC Networks, Frito Lay, National Van Lines, ary maro hafa i Andrew. Miaraka amin'ny traikefa momba ny fampiroboroboana tranonkala nandritra ny 8 taona mahery, manam-pahaizana manokana amin'ny WordPress, dia veterana efa za-draharaha izy.
Aza atao ambanin-javatra ny fiantraikan'ny magazay biriky sy molotra
Ankavia: Mamorona, misafidy, mampihetsika ary mandrefy ireo mpanentana Instagram